Homeभिडियोअर्जुनको आमा अचानक रुदै मिडियामा, आखिर के भयो ?(भिडियो हेर्नुहोस)
September 1, 2020 admin भिडियो 6678
केहिसमय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका कैलालीका अर्जुन वीकको यतिबेला जीवनशैली फरक बनिसकेको छ ।
पिठ्युँमा छोरा बोकेर रिक्सा चलाउने अहिले गायक बनिसकेका छन् । सञ्जालमा सेलिब्रेटी भन्दा कम चर्चा छैन उनको । तर, अर्जुनले भाइरल हुनको लागि यो सबै गरेको भन्नेहरुपनि प्रसस्तै भेटिन थालेको छ ।
त्यस्तै फेरि उनकी आमालाई एक युटुबर ले मिडियामा ल्याएका छन् । उनकी आमाले आफ्नो छोरा र बुहारीको सम्बन्ध बारे यसरी खुलेर बताएकी छिन् । यसको भिडियो हेर्न तल जानुहोला….
यो पनि… अब बेरोजगारीलाई सरकारले नेपालमै जागीर दिने…
बेरोजगारलाई रो’जगारी खोज्न सहयो’ग गर्ने “श्रम सूचना बैंक” खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय या’दवले आइतबार बैंकको औप’चारिक उद्घाटन गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले चा’लु आर्थिक वर्षको बजेट’मार्फत् ल्याएको यस कार्यक्रमलाई मन्त्री रायले कार्यान्वय’नमा ल्याएका हुन् । सरकारले बजेटमा प्रत्येक स्था’नीय तहमा रहे’का श्रम सूचना केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने घोष’णा गरेको थियो ।
श्रम सूचना बैंक वेरोजगारलाई रोजगारी खो’जिदिने नेपाल सरकारको स्वामित्वको एउटा प्लेट’फर्म हो । यो बैंकमा रोज’गारदाताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार श्रमि’कको माग गर्न सक्छन् भने श्रमिकले पनि आफ्नो रुचि र क्षम’ताअनुसार विभिन्न क्षे’त्रमा श्रमको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसका लागि श्रम बैंकको आधि’कारिक वेभसाइट (www.lib.gov.np) मा गएर रोजगा’रदाता र श्रमिक दुवै पक्षले आफ्ले चाहेको श्रमिक वा रोजगारीको विवर’ण प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । श्रमिकले रोजगारदा’ताले राखेको विज्ञाप’नमा आवेदन दिनसक्ने व्यव’स्था समेत गरि’एको छ ।
यो बैंकले क्षेत्रगत रुपमा रोजगा’रीको माग र आपूर्तिको बारेमा तथ्यांक संकलन गर्ने उद्देश्य पनि राखेको । श्रममन्त्री रायले श्रम बैंकमा रोजगा’रदाता र श्रमिकको आव’द्धता बढ्दै जाँदा श्रमको माग हुने र श्रमि’कहरुले माग गर्ने क्षेत्रको बारेमा सूच’ना थाहा हुने भएकोले यसले रोजगारीका क्षेत्र र सीप विका’समा लागि सजिलो हुने विश्वा’स समेत व्यक्त गरे ।
श्रम बैंकमा सीप नभएका श्रमिकले स’मेत सहभागित जनाउन पाउनेछन् । कुनै रोजगार’दाताले सीम नभएका श्रमिकलाई सीप सिकाएर काममा लगाउन चाहेमा सो श्रमि’कको तालिम अवधिको आधा पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने व्यव’स्था समेत गरेको छ ।
यस’का लागि सरकारले १ अर्ब रुपैंया’को बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमबाट करिब ५० हजा’र नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
अर्जुनसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नुहोस्
September 4, 2020 admin भिडियो 6426
September 1, 2020 admin भिडियो 7438
September 14, 2020 admin भिडियो 6790
नेपाल विद्युत प्राधि:करणकाे का:र्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्त गर्न मा’ग गर्दै माइतीघरमा युवाह:रूले नारा:बाजी गरेका छन्। सोमबार साँझ युवाह’रूले माइतीघरमा भेला भएर ना’राबाजी गरेका हुन् ।कुलमानका पालामा लोडसेडिङ अ’न्त्य भएकाले पुन उनलाई नि’युक्त